Mnangagwa, Chamisa talks kick off – Zimtoday
Posted by: admin in Local, Politics December 6, 2018	0 229 Views
There could finally be light at the end of tunnel for long suffering Zimbabweans, after it emerged yesterday that President Emmerson Mnangagwa and opposition leader Nelson Chamisa are indirectly engaging each other in talks aimed at ending the country’s decades-long political and economic crisis.
As Zimbabwe’s economy continues to deteriorate, Chamisa cranked up the political heat on President Mnangagwa and his ruling Zanu-PF – calling for the immediate establishment of a transitional authority to stabilise the country.
In a petition which the MDC handed over to Parliament and the presidency after thousands of its supporters marched in Harare – which was copied to Sadc chairperson Hage Geingob of Namibia and African Union chairperson Paul Kagame of Rwanda – Chamisa said a transitional authority was the only viable route back to political legitimacy in the country.
This comes after Mnangagwa – speaking through his spokesperson George Charamba in an exclusive interview with the Daily News, said he was open to talks with Chamisa, on the strict understanding that the MDC leader recognised the president as the legitimate winner of the country’s hotly-disputed July 30 election.
This, in turn, came after Chamisa and his key lieutenant Tendai Biti had earlier on Monday told the Commission of Inquiry probing the August 1 shootings in Harare – which left at least six civilians dead – that political dialogue was the only solution to ending the country’s political and economic problems.
Previous: Zimbabwe’s hospitals crisis deepens
Next: Mugabe ally’s trial postponed to next year
Tsvangirai estate revealed